Heathrow: fanidiana ny sidina Transatlantika izay mitentina UK £ 23 tapitrisa isan'andro
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Heathrow: fanidiana ny sidina Transatlantika izay mitentina UK £ 23 tapitrisa isan'andro
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
CEO an'ny Heathrow, John Holland-Kay
Na dia vaovao mahafinaritra aza fa misy mpandeha vita vaksiny indroa tsy mila karokantine intsony avy amin'ireo firenena amber, ny minisitra kosa dia mila manitatra io politika io amin'ireo teratany amerikana sy eropeana raha te-hanomboka ny firenena toekarena.
Ireo firenena eoropeanina izay nanohana ny sehatry ny fiaramanidina manerana ny areti-mandringana dia mahita ny fitomboana haingana indrindra rehefa mivoaka avy amin'ny areti-mandringana izy ireo.
Ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha avy any Heathrow mankany Etazonia dia nidina manodidina ny 80%, fa tany amin'ny EU, izay nisokatra indray mandeha miaraka amin'i Etazonia dia nahita 40% nidina fotsiny ny fifamoivoizana.
Ny fahazoana manao varotra indray an'i Britain amin'ny eran'izao tontolo izao dia manohina ny drafitry ny governemanta ho an'ny Global Britain aorian'ny Brexit.
Heathrow ny isan'ny mpandeha dia saika 90% no mihena amin'ny isa mpandeha mialoha ny areti-mandringana 2019, ary ambany kokoa noho ny mpifaninana EU.
Ireo firenena eoropeanina izay nanohana ny sehatry ny fiaramanidina manerana ny areti-mandringana dia mahita ny fitomboana haingana indrindra rehefa mivoaka avy amin'ny areti-mandringana izy ireo. Samy nihoatra ny volan'ny entana 2019 i Schiphol sy i Frankfurt, nitombo 14% sy 9% raha oharina tamin'ny taona 2019, fa ny taonan'ny entana ao Heathrow, ny seranan-tsambo lehibe indrindra any Angletera dia mbola midina 16%. Saika ny entana enta-mavesatra rehetra dia entin'ny fiaramanidina mpandeha, ary ny famerana ny dia any UK dia mametra ny varotra raha oharina amin'ireo mpifaninana EU.
Ny fanidiana ny rohy transatlantika anglisy dia mitentina 23 tapitrisa dolara isan'andro farafaharatsiny. Ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha avy any Heathrow mankany Etazonia dia nidina manodidina ny 80%, fa tany amin'ny EU, izay nisokatra indray mandeha miaraka amin'i Etazonia dia nahita 40% nidina fotsiny ny fifamoivoizana. Tandindomin-doza ny fananana tombony azo tamin'ny fifaninanana taloha teo amin'ny varotra transatlantika raha toa ka mihidy ny sisintany.
Ny fahazoana manao varotra indray an'i Britain amin'ny eran'izao tontolo izao dia manohina ny drafitry ny governemanta ho an'ny Global Britain post-Brexit. Heathrow Izy irery ihany no manana ny fahafaha-manamora ny £ 204 miliara bonanza varotra tombony ho an'ny orinasa Britanika isaky ny vazan-tany, ka miteraka vintana ho an'ny sehatry ny seranam-piaramanidina manontolo ary manamafy ny tamba-jotra ara-barotra any Angletera - fa raha toa ka mifindra hanokatra ny varotra haingana araka izay tratra ireo minisitra.
Ny fanambarana fa ny mponina ao UK vita vaksiny indroa dia tsy ho voatery hatokana intsony rehefa miverina avy any amin'ireo firenena lisitra amber avy any amin'ny 19th Dingana mandroso tokoa ny volana jolay. Na izany aza mba hanombohana ny fanarenana ara-toekarena an'i Angletera, ny governemanta dia tsy maintsy manokatra ny diany ho an'ny olona vita vaksiny tanteraka avy amin'ny firenena maro, indrindra ireo mpiara-miombon'antoka aminy toa an'i Etazonia. British Airways, Virgin Atlantika ary Heathrow dia miara-miasa mba hampisehoana fa ny vatan'ny vaksiny 100% dia azo tanterahina amin'ny check-in, ary tsy misy antony tsy tokony haneken'ny governemanta izany ho an'ireo mpandeha avy any Etazonia sy EU avy amin'ny 31st ny volana Jolay.
Ny CEO CEO Heathrow, John Holland-Kaye dia nilaza hoe:
“Na dia vaovao mahafinaritra aza fa misy mpandeha vita vaksiny indroa tsy mila quarantine intsony avy amin'ny firenena amber, ny minisitra kosa dia mila manitatra io politika io amin'ireo teratany amerikana sy eropeana raha te-hanomboka ny firenena toekarena. Ireo fanovana ireo dia ho zava-dehibe amin'ny mpanondrana izay resin'ny mpifanandrina EU sy ny fianakaviana tafasaraka amin'ny olon-tiana. Manana ny fitaovana rehetra hanombohana soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena isika, ary izao no fotoana tokony hiaingan'ny Global Britain! ”